दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर १ करोड ८० लाखभन्दा बढी नोक्सानीमा
वैशाख २१, काठमाडौं । दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेड यसवर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १ करोड ८० लाख ७३ हजार खुद नोक्सानीमा रहेको छ ।
गत वर्ष यो अवधिसम्म रू. ३ करोड १६ लाख ६० हजार खुद नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले करीब ४३ प्रतिशत नोक्सानी सुधारेको हो । यसवर्ष कुल आम्दानीमा वृद्धि भएकाले पनि नोक्सानीमा सुधार देखिएको हो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको विद्युत् विक्री आम्दानी घटेपनि अन्य स्रोतबाट आम्दानी भएकाले कुल आम्दानी बढेको छ ।
यसवर्ष विद्युत् विक्रीबाट रू. ५ करोड २८ लाख ४२ हजार र अन्य स्रोतबाट रू. १ करोड १ लाख ८६ हजार आम्दानी भएको छ । गत वर्ष विद्युत् विक्रीबाट रू. ५ करोड ७५ लाख ९ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले अन्य स्रोतबाट आम्दानी गरेको थिएन ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २६ करोड ४० लाख रहेको छ भने जगेडा कोष रकम रू. १९ करोड ३० लाख ९४ हजार ऋणात्मक छ । गत वर्ष भन्दा यस वर्ष जगेडा कोषको ऋणात्मक रकम १८ प्रतिशत बढी भएको हो ।